uhteik: June 2017
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ပျက်သိမ်းပေးရန် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရန် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း ၂၂ ဖွဲ့က တောင်းဆိုချက်ထုတ်ပြန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန အပါအဝင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၂ ဖွဲ့ပါဝင်သည့် “ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် လှုပ်ရှားမှု ပူးပေါင်းအဖွဲ့” က လူ့ရပိုင်ခွင့်များအပေါ် ထိခိုက်မှုများရှိလာသောကြောင့် ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)အား ဖျက်သိမ်းပေးရန် အပါအဝင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအပေါ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လွတ်တော်အားတောင်းဆိုသည့် ပူးပေါင်းကြေညာချက် တစ်ရပ်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုပါသည်။
အဆိုပါ တောင်းဆိုချက် အပြည့်အစုံမှာ -
Posted by Unknown အချိန် 4:44 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
တယ်လီနော၏ 4G/LTE ၀န်ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် တိုးချဲ့ ပေးအပ်
· တယ်လီနော 4G/LTE ကွန်ရက်ဖြင့် ‘အ၀ိုင်းမလည်တော့ပါ’ တစ်နည်း Loading အတွက် အချိန်မစောင့်ရတော့ပါ။
· လာမယ့်လများ အတွင်း 4G/LTE၀န်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုများပြားသည့် မြို့ကြီးများနှင့် မြို့ပြများတွင် တိုးချဲ့ ပေးအပ် သွားမည်။
ဇွန်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန် - တယ်လီနောမြန်မာလီမိတက် (“တယ်လီနော”) သည် ကုမ္ပဏီ၏ စစ်မှန်သော 4G/LTE ၀န်ဆောင်မှုများကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အောင်မြင်စွာ မိတ်ဆက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ယင်းဝန်ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော်ဖြစ်သော မြစ်ကြီးနားမြို့နှင့်အတူ ၀ိုင်းမော်မြို့တွင် ပါ ယနေ့မှစ၍ တိုးချဲ့ ပေးအပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Unknown အချိန် 4:36 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Posted by Unknown အချိန် 6:02 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
“မိုးရာသီ Promotion အဖြစ် ads.com.mm မှ ရေစိုခံကျောပိုးအိတ်များ မဲဖောက်ပေးမည်”
ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာ မိုးကလည်းကောင်းနေတော့ အလုပ်သွားကျောင်းသွားတဲ့အခါ ပစ္စည်းတွေ မိုးရေစိုမှာကို စိတ်ပူနေရပါတယ်။ မိုးရာသီဖြစ်တဲ့အလျောက် မိုးရေစိုခံတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေက ဈေးကွက်ထဲမှာ အရောင်းသွက်နေပါတယ်။
အပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာရော အွန်လိုင်းပေါ်မှာပါ ရေစိုခံ ဖုန်း ၊ အိတ် ၊ ဖိနပ် ၊ နာရီ ၊ ကင်မရာ ၊ speaker တွေကအစ ဘီရိုလို အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောင်းချဝယ်ယူ လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ရေစိုခံပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဖုန်း ၊ နာရီနဲ့ အိတ်တွေက အထူးလူကြိုက်များပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာလဲ အရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လူကြိုက်များပြီး လိုအပ်တဲ့ ရေစိုခံပစ္စည်းလေးတွေထဲက တစ်ခုကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပြီး သုံးစွဲသူတွေကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖို့ads.com.mm ကနေ စီစဉ်ထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်၏အခမဲ့ကြော်ငြာစုံ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ads.com.mm ကနေ မိုးရာသီ ပရိုမိုးရှင်းအဖြစ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သုံးစွဲသူတွေကို ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့အတူ ရေစိုခံ Giordano ကျောပိုးအိတ်တွေကို လက်ဆောင်ပေးအပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
ads.com.mm ကို အသုံးပြုကြတဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မိုးရာသီ မိုးရေစိုစိုထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ကျောင်းသွား ရုံးတက်နိုင်ဖို့ ငွေကျပ် ၃၈ဝဝဝ တန် Giordano ကျောပိုးအိတ်လေးတွေကို ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့အတူ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 5:27 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
Posted by Unknown အချိန် 5:03 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ကိုယ့်ဘ၀အတွက်တော့ ဖခင်ကောင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ သတိပေးတဲ့ နေ့ပါပဲ။
ကိုယ့်ကသာ ဖခင် ဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်အဖေကမှ မရှိတော့တာကိုး။
ဒီနေ့ အဖေနေ့ မှာ အဖေ့ကို သတိရ တမ်းတနေတာထက်
ကိုယ်သာ ဖခင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြစေလိုပါတယ်။
Posted by Unknown အချိန် 5:49 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဒီနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်လာတော့ စာရင်းဇယားအရ ဖြေဆိုသူ ၇၁၅၁၈၈ ဦးမှာ ၂၄၂၇၃၆ ဦး အောင်မြင်ပြီး အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း ၃၃.၈၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသတဲ့။
ကဲ ဖြေတဲ့သူ ၇သိန်းကျော်မှာ အောင်တဲ့သူက ၂သိန်းခွဲ မပြည့်ဘူး။
ဒီတော့ဗျာ အောင်သူတွေအတွက် တက္ကသိုလ်တွေ ဆောင်ရွက်ပေးထားကြသလို
မအောင်သူတွေအတွက် ပြန်လည် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုဖို့
ကျောင်းပြန်မတက်သူများအတွက် သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ သင်ကြားနိုင်ဖို့ ဒါတွေ အလေးပေး ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မအောင်မြင်ခဲ့သူတွေရဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက စာမေးပွဲ ပြန်ဖြေကြမလဲ။
Posted by Unknown အချိန် 3:28 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မနက်ကျရင် အောင်စာရင်းတွေ ထွက်ပါပြီဗျာ
ဒီလိုအချိန်မှာ ပုံပြင်တွေ များစွာ ကြားခဲ့ကြပြီးပါပြီ။
စာမေးပွဲကြောင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေဘ၀ လမ်းမှား မရွေးစေလိုပါဘူးဗျာ။
မိဘတွေက သားသမီးတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုလည်း ၀မ်းသာခံစားကြရသလို
ရှုံးနိမ့်မှုကိုလည်း မျှဝေခံစားနားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
မိဘတွေက မနှစ်သိမ့်ရင် ဘယ်သူ သူတို့ဘက်က ရှိမလဲဗျာ။
အစ်ကို၊ အစ်မ၊ ဦးလေး၊ အဒေါ်၊ အဘိုး၊ အဘွား တို့ကလည်း အောင်မြင်ရင် အတူတကွ ပျော်ရွှင်ကြသလို ရှုံးနိမ့်မှုကိုလည်း အပြစ်မတင်ဘဲ နှစ်သိမ့်ပေးရင်း သူတို့အတွက် နောက်တစ်နှစ်တာ ပြင်ဆင်ခွင့် ပေးကြပါလို့ . . . . . .
ဒီလှိုင်းတစ်လုံးနဲ့ မပါလာရင် နောက်လှိုင်းတစ်လုံးမှာ ပိုပြီး ကြီးတဲ့ လှိုင်းစီးနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေဗျာ
Posted by Unknown အချိန် 7:25 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မနက်ဖြန်မှာ တူ၊တူမလေးတို့အတွက် ဘ၀ တစ်ဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲလို့ ဆိုနိုင် ၁၀တန်းစာမေးပွဲ(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)အောင်စာရင်းတွေ ထွက်တော့မယ်။
တကယ်တော့ အောင်စာရင်းဆိုတာ တူ၊ တူမတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုအပေါ် ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ရလဒ် တစ်ခုပါပဲ။
၁၀တန်းဆိုတာ ကလေးဘ၀ကနေ လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ် ပီပီပြင်ပြင်ပြောင်းလဲ လိုက်တဲ့ သဘောတစ်ခုပါပဲ။
၁၀တန်းအောင်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတော့ တက္ကသိုလ်တက်ဖြစ်ရင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တွေ ဖြစ်လာမယ်ပေါ့။
၁၀တန်း မအောင်ခဲ့ရင်ရော . . . .
တူ၊ တူမတို့ စိတ်ထဲမှာ ၁၀တန်း စတင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာ ကြိုးစားဖို့တော့ ဆုံးဖြတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တချို့လည်း အတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေက တကယ်မဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘူးပေါ့။ စာမေးပွဲလည်း ဖြေရော ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ပေါ်ပါလေရော။
ဒီလိုပဲ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြည့်ပြီးရင်လည်း အတွေးတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပေါ်လာကြပါဦးမယ်။
ဒီနေရာမှာ တူ၊ တူမတို့ကို မှာချင်တာကတော့ စာမေးပွဲ အောင်ခြင်း၊ ရှုံးခြင်း ဆိုတာ ကမ်းစပ်မှာရှိတဲ့ လှိုင်းတွေလိုပါပဲ။
လှိုင်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကမ်းခြေကို လာရိုက်ခတ်ကြပါတယ်။
ရိုက်ခတ်တဲ့လှိုင်းတိုင်း ကမ်းခြေကို ကျော်မသွားဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားကြရပါတယ်။
လှိုင်းတွေထဲမှာက ပိုကြီးတဲ့ လှိုင်းပါသလို၊ သေးတဲ့ လှိုင်းလေးတွေလည်း ပါတာပေါ့။
တူ၊ တူမတို့ဘ၀အတွက် အခု စာမေးပွဲဆိုတဲ့ လှိုင်းတစ်ခုပြီး တစ်ခုလာရိုက်တာပါ။
ဒီလှိုင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်စွာ စီးကြမလား၊ လှိုင်းအောက်ကို ၀င်ကြမလား . . .
၁၀တန်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ရုံနဲ့ ဘ၀ကို မပြောင်းလဲ စေနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။
ဒီလိုပဲ ၁၀တန်းမှာ ဒီနှစ် ကျရှုံးခြင်းကလည်း ဘ၀ကို မပြောင်းလဲ စေနိုင်သေးပါဘူး။
၁၆နှစ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ ဘ၀ရဲ့ နုပျိုတဲ့အရွယ်မှာ ပြင်ဆင်ခွင့်အပြည့်ရှိတဲ့အချိန်ပါ။
အဓိက ကတော့ ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိဖို့ပါပဲ။
ဦးဆို ၁၀တန်းအောင်စာရင်းကြည့်ပြီး ငိုခဲ့ရတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၀တန်း အောင်ခဲ့လို့ပါ။
ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ရမှတ်က ငါးဘာသာဖြေ ၂၀၆ မှတ်ပါ။
မြန်မာစာ တစ်ခုပဲ ၄၆မှတ်၊ ကျန် လေးဘာသာ ၄၀ပါ။
ဒီတော့ တစ်ခါတည်း စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ၀ါသနာပါတဲ့ မြန်မာစာ ကို လျှောက်လိုက်တယ်။
မြန်မာစာ ဒုတိယ နှစ် တက်နေစဉ်မှာပဲ တခြား ဒီပလိုမာတစ်ခု သွားတက်လိုက်တာ အဝေးသင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ဒုတိယအောင်ပြီး ဂုဏ်ထူးတန်း ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော။
ဦးကတော့ အဝေးသင် ဒုတိယနှစ်ပေါ့ကွာ။
ဦးစိတ်ထဲ သူတို့လို မဟာ ပညာရပ်တစ်ခု လိုချင်မိတယ်။ ကိုယ် ရောက်ရာနေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တယ်။
ဦး အဲဒီအချိန်မှာ အလုပ်လုပ်နေပါပြီ။ အလုပ်ထဲကနေပြီး အဝေးသင်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
တတိယနှစ်မှာတော့ ဦး အနေနဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ်တန်း ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ လိုချင်တာ တစ်ခုရဖို့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပါပဲ။
မဟာတန်း တက်ဖို့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ တက်ခဲ့ရတာပါ။
ညဘက် အလုပ်လုပ် နေ့ဘက် ကျောင်းတက်ပေါ့။
မဟာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ ဘွဲ့ရတော့ ဘာတွေ ရလဲ လို့ ပြောရရင်တော့
ဘာမှ မထူးဘူးလို့ ပြောရမှာပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ လိုက်ဖက်တာကို ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရှာဖွေရတာလေ။
ကိုယ်ရထားတဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ ဒီပလိုမာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေရတာပေါ့။
အခုတော့ အသက် ၄၀မှာ ဘ၀ လမ်းကြောင်း တစ်ခုပေါ် ရပ်တည်နိုင်တယ်လို့တော့ ပြောရတာပေါ့။
၁၀တန်း အောင်စာရင်းက စာမေးပွဲ မဖြေဆိုခင်မှာတော့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
၁၀တန်း စာမေးပွဲ ဖြေပြီးချိန်က စပြီး အောင်စာရင်းထွက်ချိန်မှာတော့ အရေး မပါတော့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
စာမေးပွဲ အမှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်မကောင်းသည်ဖြစ်စေ
မိမိ အနာဂတ်ဘ၀ ကို မိမိသာလျှင် ကြိုးစားရမှာပါ။
လှိုင်း တစ်လုံး ပြီး တစ်လုံး အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားကြပါ တူ၊ တူမတို့ရေ . . . . .
Posted by Unknown အချိန် 4:55 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာအောင်ကြီး နဲ့ တွေ့တယ်ဗျ
အောက်တိုဘာ အောင်ကြီး ဆိုတာ ကာတွန်း ရုပ်ပုံနဲ့ သူနဲ့ တစ်ပုံစံထဲလေ
ကတုံး နဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးနဲ့ပေါ့
အပြင်နဲ့ကွာတာက ကာတွန်းထဲမှာ ကတုံးမှာ ပလာစတာ ကပ်ထားတယ်
အပြင်မှာတော့ ပလာစတာ မပါဘူးပေါ့ဗျာ။
ဘေးက ကာတွန်းဆရာကြီးတွေနဲ့ စကားပြောရင်း
ဆရာတော့ လူတွေက သိကြပါတယ်ဆိုတော့ ကိုအောင်ကြီးက ပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် မဟုတ်တာ မလုပ်ရဲတာတဲ့။
မနေ့က အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ည ၈နာရီခွဲကျော်လို့ ၉နာရီထိုးတော့ပါမယ်။
ဆူးလေ မှတ်တိုင်မှာ လိုင်းကားတွေက သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ အောင်မင်္ဂလာ ၁၀၀၀ ကား တစ်စီး ရောက်လာပါတယ်။ မြောက်ဥက္ကလာ အဝေးပြေး ဆိုပြီး လူခေါ်နေတာပေါ့။
အချိန်ကလည်း မိုးချုပ်၊ မိုးကလည်း ရွာထားတော့ မတတ်နိုင်ဘူး ၁၀၀၀ ကားပဲ စီးပြန်မယ်ဆို ကားပေါ် တက်တော့ လူသိပ်မပါသေးဘူး။ ၄ယောက်ပဲပါတယ်။
ကားသိမ်းချိန်ဆိုတော့ စပယ်ယာက လူခေါ်ရင်း တန်းထွက်လာတာ။ ဆူးလေး လူကူးခုံးကျော်အောက်နားမှာ လူတစ်ယောက်က မေးတယ်။ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးရောက်လားတဲ့။
စပယ်ယာက ရောက်တယ်လာ တက်တက် ဆိုတော့ တစ်ယောက်ဘယ်လောက်လဲ တဲ့
စပယ်ယာက တစ်ယောက် တစ်ထောင် ဆိုတော့ ဟိုက မစီးတော့ဘဲ နောက်ဆုတ်သွားတယ်။
စပယ်ယာက ထပ်မေးတယ်။ ပိုက်ဆံမပါလို့လားတဲ့။
ဟိုက ၅၀၀ ပဲ ပါတော့လို့ပါ လို့ ပြန်ဖြေတော့ စပယ်ယာလုပ်သူက တက်တက်၊ ပိုက်ဆံ တကယ်မပါရင် စီးလို့ရပါတယ်ဗျာ . . . တဲ့
Posted by Unknown အချိန် 1:58 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး